Waxsoosaarka maaskaro ee dhagta Shiinaha Warshad iyo Warshad | Tiknoolajiyada Caafimaadka ee Cadeysan ee Hebei
Taxanaha qaybta casriga ah
Maaskarada dhegaha lagu dhejiyo
Maaskarada caafimaad ee la tuuri karo ayaa loo isticmaalaa in lagu joojiyo buufinta ka soo baxda daloolka afka iyo sanka, waxaana loo isticmaali karaa daryeelka nadaafadda ee la tuuri karo ee ku jira bey'adaha caafimaad ee caadiga ah. Waxay ku habboon tahay howlaha guud ee daryeelka caafimaadka, sida nadaafadda nadaafadda, diyaarinta dareeraha, gogosha sariirta, iwm.
1. Way ku habboon tahay in la xidho oo ay ku habboon tahay dadka badan, ma qabato neeftaada, si habsami leh ayey u neefsataa, waxayna si wax ku ool ah u go'doomisaa walxaha bakteeriyada.
2. Waxay si wax ku ool ah u xakameyn kartaa buuqa, manka, sigaarka, walxaha bakteeriyada iyo walxaha kale ee waxyeellada leh.
3. Ka hortag dhibcaha boodhka, sifeeyaha wasakhda badan ee hawada, fududahay in la qaado, khafiif ah oo sahlan in la xidho, waxayna ka saari kartaa gaaska qiiqa si loo neefsado hawo cusub.
4. Badeecaddu ma samaynayso qurxinno aan micne lahayn, waji-xirfado maaskarada ka-hortagga dhibcaha ah, shaqo-qabasho iyo ilaalin ah ayaa nolosha ka dhigaysa mid caafimaad qabta.
5. Qalabka wax soo saarku waa dhalaalaan dharka la afuufiyo, maqaarka oo aan habooneyn ee dharka aan lahayn, sifeynta waxtarka sare, V-qaabeynta qaabka, oo ku habboon dad badan oo wajiyo badan leh.
Sheygan waa la nadiifiyay by ethylene oxide, oo ku habboon dadka waaweyn, waayeelka iyo carruurta, isbitaalada dadweynaha, fuulista banaanka, waxayna ka hortageysaa boodhka, manka, iyo fayrasyada.
Noocyada: Maaskarada caafimaadka Dadka: Shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha la xiriira
heerka: GB19083-2003 Heerka Filter: 99%
Goobta wax soo saarka: Gobolka Hebei Sumadda: Jacaylku wuu awoodaa
tusaale: Dhagaha Nooca jeermiska dila: Dabaysha Ethylene
cabir: 17.5 * 9.5cm Shahaadada Tayada: Hayso
Nolosha shelf: 3 sano Kala soocista qalabka: Heerka 2
heerka amniga: 0469-2011 Maaskarada qalliinka caafimaadka magaca sheyga: Maaskaro caafimaad oo la tuuri karo
dekedda: Dekedda Tianjin Qaabka mushaar-bixinta: Warqadda amaahda ama wareejinta siligga
1. Isticmaal maaskaro si aad si taxaddar leh u daboosho afka iyo sanka oo aad si adag ugu xirtid si loo yareeyo farqiga u dhexeeya wejiga iyo maaskaro;
2. Markaad isticmaaleyso, iska ilaali inaad taabato maaskaro-markaad taabato maaskaro la isticmaalay, tusaale ahaan, si aad uga saarto ama u nadiifiso maaskarada, gacmahaaga ugu dhaq saabuun iyo biyo ama isticmaal aalkolo gacmaha lagu nadiifiyo;
3. Ka dib markii maaskaradu qoyan tahay ama qoyaan ku sumowday, gasho maaskaro cusub oo nadiif ah oo qallalan;
4. Dib ha u isticmaalin waji-shareerka la tuuro. Maaskarada la tuuri karo waa in la tuuraa isticmaal kasta ka dib.
Kaydinta iyo Taxaddarrada
1. Maaskarada guud ee caafimaadka waa in la beddelaa 4 saacadood ka dib isticmaalkeeda dibna looma isticmaali karo; iyo haddii aad qashin hoos uun u tuurtid oo aadan dad kale taaban, waxaad maaskaro geyn kartaa hawo hawo, qalalan, iyo nadaafad, ama waxaad ku ridi kartaa meel nadiif ah. , Boorso warqad hawo leh oo dib loogu isticmaalo.
2. Markaad maaskaro dhigayso, waxa fiican inaad si gooni ah u kaydiso oo aad u muujiso qofka u adeegsanaya si looga hortago kuwa kale inay u qaataan oo si qalad ah u isticmaalaan, taasoo keenaysa halista infekshinka is-tallaalida.
3. Maaskarada qalliinka ee caafimaadka, jeermiska dila, aalkolada, iwm looma isticmaali karo jeermiska, xitaa in ka badan laguma dhaqi karo biyo. Isticmaalka ka dib, ku rid boorso ama qashin qashin loogu talagalay maaskaro caafimaad.
4. Maaskarada faashadda suufka ah, waan nadiifin karnaa oo jeermiska ka nadiifin karnaa. Haddii ay suurtagal tahay, waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho laydhka 'ultraviolet light' jeermis dilaha.
Soo Bandhigida alaabta
Hore: Maaskaro faashad
Xiga: maaskaro qalliin
Maaskaro ilaalin caafimaad oo la tuuri karo
Cinwaanka: F / 10, Dhismaha Innovation, No.315, Changjiang Boulevard, Aagga Horumarinta Teknolojiyada Sare, Magaalada Shijiazhuang
Telefoonka: + 86- 15613301827